हत्या या आत्महत्या ? हत्या भए हत्यारा को हुन् ? किन प्रशासन बेखबर छ ? - हिमाल दर्पण
हत्या या आत्महत्या ? हत्या भए हत्यारा को हुन् ? किन प्रशासन बेखबर छ ?
by Himal Darpan २ महिना अघि0Comment
आजकाल दिनहुँजसो सञ्चार माध्यममा मान्छे मरेका समाचार सुन्न र हेर्न परिराखेको छ । ति मरेका घटनाहरु कित त अपहरण पछि मारिएका छन्, कित व्यक्तिगत दुश्मनीका आधारमा मारिएका छन् । प्रशासनको फितलो अनुशन्धान, राजनैतिक चलखेलका साथै प्रशासन नै किनबेच हुने अवस्थाले यस्ता घटनालाई बल पुगिराखेको छ । पछिल्लो घटनाक्रमलाई मात्र नियाल्ने हो भने अधिकासं घटनाहरु स्थानिय तहमा नै केहि डर धम्की, राजनैतिक डरत्रास र बल प्रयोग गरेर मिलाउन खोजेको देखिन्छ । केहि घटनाक्रम मात्र राष्ट्रिय समाचारका लागि मसला बन्ने गरेको छ । प्रशासनले छानबिन गरेर अपराधी समाते पनि राजनितिक दवावले गर्दा मुद्धा मालिला चलाउन गार्हो परेको कुरा नेपाल प्रहरीका केही वरिष्ठ अधिकारीहरु बताउँछन् ।
केहिदिन अघिमात्र गुल्मिमा यस्तै घटना घटेको छ । गत जेठ २६ गते साँझ अन्दाजी ६ बजेको समयमा इस्मा गाउँपालिका–५, पाहकटेरी गाउँका ३० वर्षीय विदुर विक्रम कुँवर घर नजिकै मृत भेटिएका थिए । मोटरबाटो देखि करिव ४५ मिटर तल राँगापाईलाको भिरमा मृतको शव फेला परेको थियो । कुँवरको शव घरदेखि ३ सय मिटर पूर्वतर्फ भेटिएको थियो । उनी अघिल्लो दिन दिउँसो दुई बजेको समयमा घरदेखि उता पश्चिमतर्फ खादीपाटीको प्रतिक्षालयमा पुगेका थिए । जहाँ एउटा होटल पनि छ । उनीसंग त्यस टोलका प्रकाश अर्याल, रामबहादुर विष्ट र सन्तोष विष्टसंग क्यारम्बोर्ड खेलेको स्थानीयले बताएका छन्
मृतक बुबाले राति छोरा घर नआएपछि ती खानपिनमा बसेका साथीहरू मध्येका केशव कुँवरलाई “यति अबेर सम्म घर आएनन् कता गयो ?” भनेर फोन गरेर सोध्दा ८/९ बजे नै यहाँबाट घर जान हिंडेको हो भनेर जवाफ दिएको बताइएको छ ।
त्यस दिन दिउँसो छापास्थित माइती घरबाट आफ्ना तीन वर्षीय छोरा आदर्शलाई लिएर फर्किदै गरेकी बिदुर विक्रमकी श्रीमती शारदा कुँवरले त्यस स्थानमा श्रीमानलाई देखेकी थिईन् । मृतक विदुरका बाबु धनबहादुर कुँवरले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा छोराको रहश्यमय मृत्यु भएको भन्दै घटनाको छानविन र अनुसन्धानका लागि जाहेरी दिएका थिए । तर प्रहरीले आजसम्म घटनाको सत्यतथ्य के हो सावर्जनिक गर्न सकेको छैन् । सो घटना घटेपछि केही व्यक्तिको डरत्रासका कारण परिवारजन नै गाउँबाटै विस्थापित भएका छन् ।
हामीले स्थानिय व्यक्तिहरुसँगको छलफल, घटनास्थलको चेकजाँच र परिवारजन सँगको सोधपुछबाट उक्त घटना हत्या हुनसक्ने केहि आधारहरु पेश गरेका छौं :
आशंका नं १
शवको प्रकृति हेर्दा उनी लडेर मृत्यु भएको ठाँउमा कडा चट्टानहरु नरहेको र त्यस भिरबाट खस्दा हात खुट्टा भाँचिनु पर्नेमा केहि नभएको । मृतकको खुट्टामा एउटा मात्रै चप्पल भटिएको । जुन चप्पल घरबाट हिंड्दा लगाइएको नभई अर्कै भएको परिवारले बताए । उनको निधारमा कसैले घोचेर चोट लागेको जस्तो देखिन्छ । पछाडि पट्टिको शरीरमा कसैले निर्घात कुटे जस्तो चोटहरू देखिन्छ ।
आशंका नं २
प्रहरी नआई शव उठाउनु पर्यो भनेर त्यहाँका एक जना नेताले सदरमुकाममा रहेका कुनै एक पहुँचवाला व्यक्तिलाई फोनमा भनेको बताइन्छ । अर्को एक नेतालाई उसै दिन साँझ फोन गर्नुले आफूहरू उसै दिनदेखि आफन्त थप संशंकित भएको ।
आशंका नं ३
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान नगर्दै नजिकै रहेको इस्मा प्रहरी चौकीले मृतक लडेर मृत्यु भएको भनेर जिल्लामा रिर्पोट पठाएको प्रमाण परिवारले फेला पारेका छन् ।
आशंका नं ४
उनी अघिल्लो दिन साँझ ८ बजे घर फर्केको भए बाटैमा रहेको घर नपसेर घरदेखि उता किन पुगे ?
आशंका नं ५
उनले भुटुवासँग एउटा क्वाटर मात्रै मदिरा पिएर हिंडेको त्यस होटलवालाले बताएका छन् । घटना स्थलदेखि वरै उनको घर छ । उनी त्यही सडक हुँदै पश्चिमतर्फबाट पूर्वतर्फ आउँदा नजिकै घर पर्दछ । घटना स्थलदेखि वरै उनको घर छ । उनी त्यही सडक हुँदै पश्चिमतर्फबाट पूर्वतर्फ आउँदा नजिकै घर पर्दछ । उनी उता जानु पर्ने कारण नै देखिन्न ।
मृतककी श्रीमती शारदाले माइतीबाट आउँदा अघिल्लो दिन श्रीमानलाई त्यही स्थानमा क्यारम्बोड खेल्दै गरेको बताउँछिन् ।
“मेरो श्रीमान त्यस दिन साँझ घरको बाटो आई उता जानु पर्ने कारण नै छैन,” श्रीमती शारदाले भनिन् “मेरो श्रीमानको लडेर मृत्यु भएको हुँदै होइन कसैले हत्या गरेर फालेका हुन् ।“
मृतकका दाजु राजेन्द्र विक्रम कुँवरले पनि भाइको लडेर मृत्यु भएको भनेर पत्याउन नसक्ने बताउँछन् । बाबु धनबहादुर कुँवर छोराको रहश्यमयी मृत्यु प्रकरणले विक्षिप्त हुँदै आएका छन् ।
उनले आफूहरूले गुहार नपाएको , त्यसका लागि सञ्चारकर्मी बोलाउँदा धम्की सहनु परेकोले २०६० सालमा आफैले बनाएको घर छाडेर अर्कैको घरमा बस्नु परेको दुखेसो गरे ।
मृतककी बहिनी उषा कुँवर र दिदी कुस्मा कुँवर हत्या नै भएको बताउँदै प्रहरी प्रशासनले राम्रोसंग अनुसन्धान गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । त्यस घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गोपचन्द्र भट्टराईले बताए ।
‘मृतकको खुट्टामा रहेको चप्पल उनी घरबाट हिंड्दा लगाएको नभई पछि त्यहाँको एक पसलबाट किनेको लगायतसम्मको अनुसन्धानमा पुगेका छौं,’ एसपी भट्टराईले भने ‘छिट्टै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने गरी हामी लागेका छौं ।’
श्रोतका अनुसार उनको शव देखेर तस्वीर खिचेका त्यहाँका एक जना पाका व्यक्तिको मोबाइलबाट त्यो तस्वीर त्यहाँका केही व्यक्तिहरूले मेटाउन (डिलिट) लगाएका थिए । पछि प्रहरीले उक्त तस्वीर पुनः निकाल्न लगाएको बुझीएको मृतकका बाबु कुँवर बताउँछन् ।
by Ramesh २३ घण्टा अघि
by Mangal २३ घण्टा अघि